ဖိုးစီ (ရုံးတော) – ဘုန်းကြီးတွေ လူလိုမသိဘူး | MoeMaKa Burmese News & Media
Join 88,308 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month August 2018 (150) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
Cartoon Box (3,573)
ရွာကျောင်း ဘုန်းကြီးက အဖေ့ ညီ အရင်း။ သူ့ အရင် ဆဒေါ်တွေကလည်း အဖေ့ ဦးလေး အရင်းတွေ (၃) ဆက်လုံး။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ သံဃာကြီးတွေ ရဲ့ ဝေယျာဝစ္စ နဲ့ ၀တ်ကြီး ၀တ်ငယ်ကို ကျနော့် အမေက အပြု စုဆုံး ဆိုရင် အလွန်ပြောတာမဟုတ်ပါ။
ခုလည်း အမေ စင်္ကာပူ ရောက်တာ (၁) လ မပြည့်သေးခင်က ပြန်ဖို့သာ လောနေသည်။ နင့်ဘုန်းကြီးက မိဌေး နဲ့ မဖြစ်ပါဘူးချည်း ပြောနေတော့သည်။ အိမ်သူက အမေ့ကို ကောင်းပေ့ ဆိုသော ဆိုင်တွေ လိုက်ကျွေး လျှင်လည်း “ဒါမျိုး ငဒို့ ဘုန်းကြီးကပ်လိုက်ရ” ဟုသာ သြဓိသ စေတနာတွေ ၀င်နေတတ်သည်။ တနေ့က ရုံးမှ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အက်ဒမင် ဝန်ထမ်း ကောင်မလေး ဂျပန်မှ ပြန်အလာ လက်ဖောက်ခြောက်စိမ်း အကောင်းစားတွေ လက်ဆောင်ပေးရာ အမေ့ကို ပြန်ကန်တော့ ဖြစ်သည်။ အမေက ချက်ချင်းပင် သူ့အ်ိပ်ထဲ ပြောင်းကာ “ဘုန်းကြီးဖို့” ဟု ဆိုသည်။ အပြင်သွားတိုင်းလည်း သူ့လက်ထဲက ငွေယားကလေးများသည် ကျောင်းအတွက်၊ ဘုန်းကြီးအတွက် ပစ္စည်း အဆန်းကလေးများ ဖြင့် ပြုန်းရလေသည်။ ဒါက သူ့ မတ်တော်မောင် ကျောင်းဘုန်းကြီး သာရှိသေးသည်။ သူ့မှာ သား၊တူ၊ မြေး ၀မ်းမနာသား ရဟန်းပျိုတွေ ပွစာတက်လို့ တွေးပူနေရသေးသည်။ ခုလည်း သူ့မြေး ထပ်ရဟန်းခံ မီအောင် ဒီဇင်ဘာ (၂၀) မတိုင်ခင် အပြန်လက်မှတ်ဝယ်ရမည်ဟု အမိန့်ချလိုက်သည်။
ကိုယ်က အအော် ခံရတော့မည်ကို မျှော်လင့်လျက် စော်ကားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ဆရာတော်က တဟားဟား ရယ်ကာ ပြန်မိန့်ပုံက
13 Responses to ဖိုးစီ (ရုံးတော) – ဘုန်းကြီးတွေ လူလိုမသိဘူး
khinkhinlay on December 5, 2014 at 6:02 pm
ဖုန်းကြီးတွေက လူလိုမသိဘူး- လူတွေက အာဏာရှင်တွေလို မပါးနပ်ဘူး- ဦးဝီရသူ ဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့အသုံးချခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မသိသလို- လူတွေကလဲ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူကို မမြင်ဘူး-ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြားဖြစ်နေတော့ အာဏာရှင်တွေ ဆင်တဲ့ ခွင် (ဂွင်) ထဲ တန်းဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ-
U Myo Sint on December 6, 2014 at 1:05 am
အလှမ်းကျယ် အလတ် မဟုတ်မဟပ်တွေများတယ်။ကိုယ့်စည်းမလုံလို့ဖြစ်နေတာတွေ ဘာသာရေး အရေခြုံ လုပ်စားတွေများ ညာတာပါတေးတွေများတယ်။အိမ်မြှောင်အမြီးပြတ်တွေသောင်းကျန်းနေတယ်။
Thet Naing on December 6, 2014 at 8:13 am
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါး။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကွန်မင့်။ ထပ်ဆင့်ရရင် အဲဒီ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆိုတာနဲ့ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ကြတော့တာပဲ။ (ဒီစကားကလည်း အစ္စလာမ်မစ်စတိတ်လို သည်းခြေကြိုက် စကားလုံး ဖြစ်နေရှာနေလေရဲ့။) အဲဒီလူတွေဟာ သာသနာရဲ့တန်ဘိုး၊ သာသနာရဲ့အမွေကို တကယ်သိရှိနားလည် ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရယူထားတဲ့သူတွေ မဟုတ်တာတော့ အသေအချာပဲ။ မြတ်စွာဘုရားက ၀က္ကလိရဟန်းကို အချည်းနှီးပဲလို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့တာကို ဆင်ခြင်ကြဖို့ကောင်းတယ်။ ဓမ္မကို ပိုသိလေ၊ သာသနာ့အမွေကို ပိုပြီးပိုင်ဆိုင်လာလေ ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ဘုရားကို စေတီကွယ်၊ တရားကို ပိဋကတ်ကွယ်၊ သံဃာကို ဘုန်းကြီးကွယ်ဆိုတာလို ဖြစ်နေကြရင်တော့ ဒီမိုကရေစီကို မှေးမှိန်၊ သေးသိမ်၊ ကွေးလိမ်သွားအောင် လုပ်နေကြတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လှည့်ဖျားမှုအောက်မှာ ဆက်နေကြရပေလိမ့်မယ်။ စစ်အုပ်စုက ဒီသည်းခြေကြိုက် စကားလုံးကို ကောင်းကောင်းအသုံချပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဝေးသွားအောင် လုပ်နေတာကို သိဖို့ကောင်းတယ်။
Catwoman on December 7, 2014 at 3:21 am
At the same time we should respect the real sangha for they re the keepers of the dhamma. Buddha passed away thousands of years ago and it is because if the sangha that we know about the dhamma. King mindon says he respects the sangha for they don’t eat dinner and they don’t have wives. It s very hard to beasangha . Even lord Buddha wasamonk for just nine times when he was filling the Paramis. Do not insult the sangha for many bad things can follow for you such as accidents, cancer, loss of loved ones. Trust me I ve seen bad things happen to who insult monks. People think they know everything. What they don’t know is there ll be an affect for good or bad deeds wherever you are.
ဖိုးစီ ( ရုံးတော ) on December 8, 2014 at 7:16 am
ကျနော် ဘ၀တလျှောက်လုံး ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေ ကြားထဲ သူတို့ အဆုံးအမ နဲ့ ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိယတ်စာပေလဲ အထိုက်အလျောက် သင်ယူခဲ့ပါတယ် ။ သံဃာ ကို တရားတော်ကို မြတ်ဘုရားကို ကံ ၃ပါး နဲ့ ဘယ်သောအခါကမှ မစော်ကားခဲ့ပါဘူး ။ ဒီစာကို ရေးရခြင်းမှာလဲ ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာ ကို ဓမ္မစစ် နဲ့ ချစ်မြတ်နိုး လွန်းလို့ လတ်တလော တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်များရဲ့ အနေအထား ကို ဒကာတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ပြန်ရေးခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ ဒီနေ့ အချိန်လောက် သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိဖူးသေးဘူး ထင်ပါတယ် ။ ကျနော် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် တွေ ၊ အမျိုးသားရေးတွေ ၊ ၀ါဒတွေ နဲ့ ချဉ်းကပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ။ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ ဘာသာ သာသနာ အသရေတင့်ဖို့ ကျနော်တို့ အားလုံး သတိ သမ္ဗဇဉ် ဥာဏ် နဲ့ ယှဉ်ကြဖို့ လောဆော်တာပါ ။ ဘုန်းကြီးတွေ ကို ဦးတည်ပြောပေမဲ့ ဆရာ ဒကာ အားလုံး စိတ်ထားတတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပြောဆို ပြုမူ တွေးကြံသမျှ ဟာ သံသရာတလျှောက် နွားနောက်ကို လှည်းဘီးလိုက်တဲ့ပမာ အစဉ်ပါမယ် ဆိုတာ နားလည်ထားပါတယ်ခင်ဗျား ။ အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Catwoman on December 8, 2014 at 9:24 pm
Yes. I lived in the us since I was 17. Here I see some are very controlling to the monks. In some monestaries, monks are like the employer of the disciples which is wrong. Some will take the money that s donated to the monk. Some ll have rules that monks cannot watch tv, read newspapers etc. some use the temple asaplace for their personal affairs. Some will even sue the monestary and get their money back. I m just saying that people are not gentle and kind hearted anymore after they live in foreign countries. They forget how precious the monks are. I am just warning you not to be like them for hell exists on this earth. Visit the er or the icu or come visit my clinic and I ll show people who re suffering. We can’t judge the monks . Don’t make judgements . If you pay respect to evenafake monk it is still good kamma. In the end it s your volition or say tana that counts
Zarni Gyi on December 7, 2014 at 5:20 am
to reform the Buddhism (my view)
Buddha Attitude @ Godly Attitude is final goal. Good Attitude to build at “Buddha monks” —> reform them to be “Buddha Attitude @ Godly Attitude”
The most Holy Person is “Buddhis Monk”. Reform the monks is the most important work to do. Ifamonk eating dinner, drinking beer .. behavour isavery bad image.
Monk/Soildier vs Country Pupulation = 0.4 million vs 50 million = 1:125 (0.8% of population) is Guinness World Record. Good Question is “Why so many monks”? .. my monk, your monk …his monk, my mom’s monk…
Catwoman on December 7, 2014 at 4:59 pm
What is godly attitude? You do know that we don’t believe inacreator or ever living god? I think you are trying to say that monks are bossy? Sometimes it isagood thing because they teach us to be good . But monks should not preach violence
Maung Maung on December 7, 2014 at 7:17 pm
ဥာဏ်တော်ဖြင့်ရှေ့ရေးကိုကြည့်ပြီး “ငါဘုရား၏ သာသနာတ်ာကို ငါ၏သားတော်များဖြစ်သော ရဟန်းများကဖျက်ကြပေလတ္တံ့ ”ဟုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းတုရဟန်းယောင် ရှင်တု ရှင်ယောင်တို့ ကြောင့် သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်လာသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်ကို တည်ထောင်ပေးခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာတော့ ဂေါတမဗုဒ္ဓကဲ့သို့ သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်လည်းမရခဲ့၊ အနာဂတ္တံသ ဥာဏ်တော်လည်းရှိသူမဟုတ်၍သာ စစ်တပ်၏ဖခင်ကြီးဖြစ်
ခဲ့ဟန်ရှိပါသည်။ အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်ခဲ့ရပါက “ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်နှိပ်စက်မည့်တပ်မျိုး ထူထောင်ပေးခဲ့မည့်အစား တိုင်းတပါးသားလက်အောက်ကျွန်သားပေါက်ဖြစ်နေရတာကပိုကောင်းပါလိမ့်ဦးမည်” ဟုပြောခဲ့မည်မှာ မချွတ်။
Magyi on December 7, 2014 at 8:45 pm
I gaveasimilar comment to some academics earlier this year, but they were firmly of the opinion that monks getting involved in today’s ultranationalist politics were simply motivated by their quest for power. I do agree with the points Poe Si has made such as monks getting manipulated for dirty politics. However, we gotalot more things to ponder actually– excessive international praise for so called ‘Saffron Revolution’, and the use of it for political purposes is one of the root causes of pushing many towards this ugly and dangerous path. Putting the blame on them for not being attuned to the complexity of secular world alone doesn’t seem to work. Hope travelogues of monks sharing international experience will help to some extent.
Catwoman on December 9, 2014 at 4:12 am
You probably wrote this with good intention but asaresult people are upset with the sangha more or monks might not like each other and not get along. I m trying to warn you it can beastrong offense. So may be go toamonk and tell him to forgive for your doing and hopefully it will be fine. Judging the sangha might be costly.
ထိုက်နန္ဒာဝင်း (Myanmar Now) ● ရှေ့ နေကိုအဂတိတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲသည်ကို ရှေ့နေအဖွဲ့အစည်းများဝေဖန်… https://t.co/oNsMJPFnLj about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဖို့လိုမည် https://t.co/qbV0UbklfG https://t.co/XTlIzyg86b about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ထင်ကျော် (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ● ညီညွတ်ခြင်းမှသည် အောင်မြင်ခြင်းဆီသို့ https://t.co/xFuK1Axn17 https://t.co/HBLqGkWW1R about7hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ အထွက်တိုးပြီ … https://t.co/FwM8Yq7aD0 https://t.co/j7ZENUjjEf about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● ဆလိမ်စု ရပ်ကွက်လေးနှင့် ဆက်စပ်၍ … https://t.co/vs5r9d05Xt https://t.co/JWu59bTLCZ 09:01:14 PM August 19, 2018 ReplyRetweetFavorite